Iyo Mac App Store inochinja uye yakafanana neIOS | Ndinobva mac
Pasina kupokana imwe yeshanduko inotarisirwa mu iyo nyowani macOS Mojave inoshanda sisitimu, chaive chaicho shanduko yekugadzirwa kweMac App Store uye iyi yakasvika. Iko hakuna chaiko shanduko zhinji kupfuura iyo yemuno yakasviba modhi uye iOS dhizaini pane macOS chero, asi shanduko yanga ichinyatso kudikanwa uye Apple yakazozviita.
Mune ino kesi isu hatina aesthetic shanduko kupfuura iko iko kwemaapps kana nzira yavanounzwa mairi iyo Mac Mac Chitoro chitsva, asi ichokwadi kuti tese takanga takamirira shanduko iyi. Hatityi hazvo kuti Apple inofarira zvikuru chitoro cheMac application, asi ichi hachisi chinhu chichauya kwatiri zvakare!
Ichokwadi chechitoro cheApple chekushandisa ndechekuti haina kunyatso chengetwa uye pamusoro pevagadziri vese vari kuenda kunovhura mashandisiro avo mairi ne "mirau yakaoma" yevakomana veCupertino. Chero zvazvingaitika, chakakosha ndechekuti chitoro ichi hachina kuregeredzwa neApple, kuti vagadziri vanotsigirwa uye vanokurudzirwa kuvhura maapps avo muchitoro asi isu tinoramba tichive nemanzwiro ekusiiwa panguva ino uye hatina chokwadi ichi ichachinja munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Iyo Mac App Store inochinja uye yakafanana neIOS